वाटमाेर ल्याउन क्यानलाई सेवा सुविधाकाे चुनाैती, काे प्रशिक्षक आउछ नेपालमा ? | Neplays.com
वाटमाेर ल्याउन क्यानलाई सेवा सुविधाकाे चुनाैती, काे प्रशिक्षक आउछ नेपालमा ?
वाटमाेरकाे सेवासुविधामा सहमति भएमा बलियाे दावेदार
By Neplays	 Last updated Nov 26, 2020
नेपाली क्रिकेट टिमले आजबाट औपचारिक रुपमा प्रशिक्षण सुरु गरेको छ । कोरोनाका कारण करिव नौ महिना मैदान बाहिर रहेका खेलाडी आजबाट फेरी अभ्यासमा जुटेका छन । नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा फर्काउँदा टिमको मुख्य प्रशिक्षकको टुंगो लगाउने समयपनि नजिकिदैछ । यसअघि तोकेको समय अनुसार क्यानले अर्को सातासम्ममा नयाँ मुख्य प्रशिक्षकको टुंगो लगाउनेछ ।
नेपाली क्रिकेटलाई नयाँ बाटोमा अगाडी बढाउनका लागि क्यानले पछिल्लो पटक मुख्य प्रशिक्षकको चयनलाई लगभग अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । क्यानले सुरुवातमा ७२ जनाबाट छानेर २५ हुँदै १२ जनाको अन्तरवार्ता सम्पन्न गरेको छ । क्यानले लिएको अन्तरवार्तामा हाइप्रोफाइल प्रशिक्षकमा एक्लो नाम डेभ वाटमोरको रहेको छ । क्यानले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार उनको उमेर बाहेक अरु सबै कुरा मिल्न आउछ ।
क्यानले आइसीसीको सल्लाहमा अन्तिममा अन्तरवार्ताका लागि १४ जना छानेकोमा दुई जना प्रशिक्षक सहभागि भएनन् । त्यसमा थिए, वेष्ट इन्डियनका एक जना र भारतीय शलक्षण कुलकर्णी । उनीहरुको समय नमिल्दा अन्तरवार्तामा सहभागिता नजनाएको बताइएको छ ।
त्यो बाहेक क्यानले अन्तरवार्ता लिएका १२ जनामा वाटमोर बाहेक पूर्व प्रशिक्षक पुबुदु दशानायके, भारतीय प्रशिक्षक अपुर्व देसाई, भारतकै बेन्कटराम, मुकुन्द पारमर, पाकिस्तानका कविर खान, जिम्बावेका पूर्व विकेटकिपर ब्याट्सम्यान ततेन्द्र ताइबु, स्कटल्याण्डका नेइल क्याक्रेइ रहेका छन । यस्तै अरु चार जनामा खासै नाम नचलेका प्रशिक्षक छन । उनीहरुले एसोसियट क्रिकेटको प्रशिक्षकका रुपमा काम नगरेका छन । त्यसमा थप एक जना पाकिस्तानी छन ।
क्यानले मुख्य प्रशिक्षकका लागि आवेदन दिँदा राखेको मापदण्डमा पुरा हुनेमा पुबुदु दशानायके र डेभ वाटमोर छन । तर वाटमोरको उमेर क्यानले राखेको मापदण्ड भन्दा बढि हुन आउछ । क्यानले मुख्य प्रशिक्षकका लागि ६० बर्षको उमेर हकबन्दी राखेको थियो ।
तर टेष्ट देश पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बावे, बंगलादेश र विभिन्न फ्रेन्चाइजी लिगमा काम गरेका वाटमोरले यदि नेपाल आउन चाहेको खण्डमा उनको उमेरको हकवन्दीलाई केहि खुकुलो गर्नेमा क्यान सकारात्मक देखिएको छ ।
वाटमोरले यदि नेपाल आउन चाहेको खण्डमा र उनको पारिश्रमिकमा कुरा मिलेमा उमेरलाई खासै महत्वका साथ नराख्ने स्रोतको भनाई छ । किनकी अहिले नेपाललाई राम्रो प्रशिक्षकका खाँचो रहेको र वाटमोर जस्तो प्रशिक्षक नेपाल ल्याउन पाउँदा निकै राम्रो हुने उनको भनाई छ ।
श्रीलंकाका पूर्व खेलाडी समेत रहेका वाटमोर अहिले सिंगापुरको प्रशिक्षक रहेका छन । नेपालमा एक पटक हाइपर्फमेन्सका लागि आएका वाटमोरलाई यदि आइसीसीले सहयोग गरेमा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि सहयोग गरेमा उनी नै नेपालको भावि प्रशिक्षक हुने संभावना बलियो रहेको छ ।
यस्तै यसअघि नेपाललाई विश्वकपसम्म पुर्याएका प्रशिक्षक पुबुदुलाई क्यानले फेरी प्रशिक्षकमा ल्याउने संभावना अलि कम छ । किनकी क्यान निलम्बन हुँदा अख्तियारमा पुगेर उनले बयान दिएको आफुहरु विरुद्ध लागेको भन्दै क्यान उनी प्रति रुष्ट बनेको थियो ।
तर पुबुदुले त्यो बेला भएको कुरालाई आफुले अर्काको कुरा सुनेर लहलहैमा लागेको र अब त्यस्तो हुने संभावना नभएको भन्दै विश्वास दिलाएका छन । तरपनि अगुल्टोले हानेको कुकुर विजुली चम्किदापनि तर्सिन्छ भने जस्तै क्यानका पदाधिकारी त्यति विश्वस्त नभएको बुझिएको छ । यदि वाटमोरको सेवा सुविधाका बारेमा कुरा नमिलेको खण्डमा दोस्रो विकल्पमा पुबुदु नै हुनेछन । यसका साथै यसअघि नेपाली टिमसँग काम गरिसकेका अपुर्व देसाईपनि यसको दावेदारमा छन । तर उनीसँग पुबुदु र वाटमोर जस्तो अनुभव भने छैन ।
अब आइसीसीले अन्तिम तीन चार जनामा कसको नाम पठाउछ भन्नेमा बढि ध्यान रहेको छ । अहिले आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको क्यानले मुख्य प्रशिक्षकका लागि मासिक १२ हजार डलरसम्म तलव दिनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसमा वाटमोर सहमत हुने हुन वा होइनन् त्यो अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
तर अबको नेपाली टिमको मुख्य प्रशिक्षकले धेरै कुरालाई समायोजन गर्नुपर्नेछ । किनकी नेपालको एकदिसिय मान्यतालाई कायम राख्ने, क्रिकेट टिममा एउटा सिस्टमको विकाश गर्न, क्यानलाई योजनाबद्ध तरिकाले प्रशिक्षण गराउन सुझाव दिन र खेलाडीलाई एक्पोजरका लागि के गर्ने भन्ने सबै काम नयाँ प्रशिक्षकले गर्नुपर्नेछ ।